သင့်အသင်းတော်မှတ်ပုံတင်ရန်ဖို့အောက်ကပုံစံကိုဖြည့်ပါ။ အဆိုပါမှတ်ပုံတင်တစ်နှစ်လျှင် $ 29.00 တစ်ကြေးလိုအပ်သည်။ သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ကိုအတည်ပြုခဲ့ပြီးပြီးတာနဲ့, သင်သည်သင်၏အကောင့် login နှင့်သင့်ပရိုဖိုင်းကို update လိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
သငျသညျအပိုဆောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးချင်ပါသလား? Yes အဘယ်သူမျှမ
မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှစ်စဉ်ပေးဆောင်နေတဲ့ $ 29.00 ကြေးလိုအပ်သည်။ အဆိုပါအခကြေးငွေပေးဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်ပြန်လည်သုံးသပ်ကာစီမံအုပ်ချုပ်သူက activated လိမ့်မည်။ သင့်အကောင့်တက်ကြွအခါသင်အီးမေးလ်တစ်စောင်လက်ခံရရှိပါလိမ့်မယ်။
ကျေးဇူးပြုပြီးသင်မှတ်ပုံတင်ဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သင့်အကောင့် activated ရှိသည် ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ သင့်ရဲ့ငွေပေးချေမှုအောင်။